“ေငြပိုရွာတဲ့ေနရာမွာ မၾကိဳးစားရင္ ေငြသံုးတဲ့ေနရာမွာ ပိုျပီးေခၽြတာေအာင္ ၾကိဳးစားရလိမ့္မယ္” – XB Media Myanmar
သင္တစ္လဝင္ေငြ ၁၀ သိန္းရိွတဲ့ခ်ိန္မွာ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဝင္ထိုင္မိလို႔ ၁/၂ ေသာင္းကုန္တဲ့ခ်ိန္မွာ ဆိုင္ကေစ်းၾကီးတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ သင္ Social Media ေပၚမွာတင္ျပီးေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး . သင္တစ္လဝင္ေငြ သိန္း ၁၀၀ ရိွတဲ့ခ်ိန္မွာ LV brand ဝယ္သံုးတာကို အထူးအဆန္း ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး.
သင္တစ္လဝင္ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ ရိွတဲ့ခ်ိန္မွာ BMW ကားအေကာင္းစာ းဝယ္စီးတာကုိ ပံုမွန္ျဖစ္ရပ ္တစ္ခုပဲလို႔ သင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္ဘယ္အရာမဆို Level ရိွပါတယ္။ လူ႔ဘဝလဲတူတူပါပဲ ။ သဘာဝကိုက ခဲြျခားထားျပီးသားပါ။ Game ကစားရင္လဲ Level ရိွပါတယ္။Rank လဲရိွပါတယ္။ အေပၚေရာက္ေလ လူေတြကအထင္ၾကီးေလပါပဲ Game မွာေတာင္မွ Level ျမင့္ခ်င္ရင္ ကိုယ္တိုင္ၾကိဳးစားမွရပါတယ္။
ပံုမွန္လူတစ္ေယာက္ေျပာတဲ့စကားက ဘယ္ေလာက္ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ေနပါေစ လူေတြအေလးမေပးပါဘူး​ ေအာင္ျမင္တဲ့ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္ ​ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းကုိေတာ့ လူတိုင္းယံုၾကည္လိုက္နာ ျကပါတယ္။ဒီေန႔ ပစၥည္းတစ္ခုကိုဝယ္လိုက္ရင္ သူ႕ရဲ႕အဆင့္အတန္းရိွပါတယ္။ ေစ်းႏွဳန္းေတြမတူၾကပါဘူး ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းႏွဳန္းနဲ႔ဝယ္ၾကပါတယ္။ ပိုရိွတဲ့သူက ပိုေကာင္းတာဝယ္မွာေပါ့။
တတ္ႏိုင္တဲ့သူက သူတတ္ႏိုင္တဲ့ေစ်းႏွဳန္းေလးနဲ႔ဝယ္မွာေပါ့ ။သူ႔လက္ထဲမွာ သိန္း ၅၀၀ အပိုေငြရိွလို႔ iphone xs ဝယ္လိုက္္တာ သူ႔အတြက္ေတာ့ ျဖဳန္းတာမဟုတ္ပါဘူး။သူ႔ေငြကိုသူသံုးတာပါ။ သူရွာႏိုင္လို႔သူသံုးတာေလ ။“ေငြပိုရွာတဲ့ေနရာမွာ မၾကိဳးစားရင္ ေငြသံုးတဲ့ေနရာမွာ ပိုျပီးေခၽြတာေအာင္ ၾကိဳးစားရလိမ့္မယ္”
သင်တစ်လဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းရှိတဲ့ချိန်မှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဝင်ထိုင်မိလို့ ၁/၂ သောင်းကုန်တဲ့ချိန်မှာ ဆိုင်ကဈေးကြီးတယ် ဆိုပြီးတော့ သင် Social Media ပေါ်မှာတင်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး . သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ LV brand ဝယ်သုံးတာကို အထူးအဆန်း မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.
သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ BMW ကားအကောင်းစာ းဝယ်စီးတာကို ပုံမှန်ဖြစ်ရပ ်တစ်ခုပဲလို့ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်အရာမဆို Level ရှိပါတယ်။ လူ့ဘဝလဲတူတူပါပဲ ။ သဘာဝကိုက ခွဲခြားထားပြီးသားပါ။ Game ကစားရင်လဲ Level ရှိပါတယ်။Rank လဲရှိပါတယ်။ အပေါ်ရောက်လေ လူတွေကအထင်ကြီးလေပါပဲ Game မှာတောင်မှ Level မြင့်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရပါတယ်။
ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားက ဘယ်လောက်သွေးထွက်အောင်မှန်နေပါစေ လူတွေအလေးမပေးပါဘူး အောင်မြင်တဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက် ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ လူတိုင်းယုံကြည်လိုက်နာ ကြပါတယ်။ဒီနေ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေမတူကြပါဘူး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ကြပါတယ်။ ပိုရှိတဲ့သူက ပိုကောင်းတာဝယ်မှာပေါ့။
တတ်နိုင်တဲ့သူက သူတတ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဝယ်မှာပေါ့ ။သူ့လက်ထဲမှာ သိန်း ၅၀၀ အပိုငွေရှိလို့ iphone xs ဝယ်လိုက်တာ သူ့အတွက်တော့ ဖြုန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ငွေကိုသူသုံးတာပါ။ သူရှာနိုင်လို့သူသုံးတာလေ ။“ငွေပိုရှာတဲ့နေရာမှာ မကြိုးစားရင် ငွေသုံးတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးချွေတာအောင် ကြိုးစားရလိမ့်မယ်”
မုန္းစြဲဇာတ္ကားႀကီးနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာဆုကို ရရွိခဲ့တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာၾသရသ
မီးဆရာဘဝကနေ အကယ်ဒမီဆုရ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်အောင် ကြိုး စားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့လူရွှင်တော် မိုးဒီ October 24, 2020
ဝေဘာဂီမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတုန်း မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးကြွလာတဲ့ဖြ စ် ရပ်မှန်တစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော် သူ October 24, 2020
အိမ်ထောင်ကွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကြူကြူ သင်း October 24, 2020
ရောဂါဝေဒနာတွေကို ကုသပေးနေတဲ့ အပေါ် မနာလိုပြီးဝေဖန်နေကြတဲ့ သူ တွေ ကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့သရုပ်ဆောင် ထူးခန့်ကျော် October 24, 2020
ပရိတ်သတ်တွေ မမှတ်မိနိုင်လောက် အောင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ မြန်မာ အိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင် ဇော်မင်းဦး October 23, 2020
ဆော့နေရင်းတန်းလန်းကနေ မေ မေ အေးမှာဆိုးလို့စောင်ခြုံထားဆိုပြီး စေင်လေးအလိုက်တသိလာခြုံပေးနေတဲ့ Austin လေးရဲ့ဗီဒီယိုလေး October 23, 2020
အိမ်ထောင်ရေး ကံမကောင်းခဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ သရုပ် ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး October 23, 2020
လက်ရှိ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ သူမရဲ့ ထက်ထက် မိုး ဦးကြားက ရယ်မောစရာ ကွာခြား ချက်တစ်ခုကြောင့် သဘောကျမဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ စမိုင်းလ် October 23, 2020
ဆင်းရဲချို့တဲ့လွန်းတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံကာ မိုးလင်းမိုး ချုပ်လှူဒါန်းနေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ အ လှူ ဗီဒီယို October 23, 2020